धर्मका नाममा राजनीति गर्ने दिन अब सकिए : मन्त्री राई- समाचार - कान्तिपुर समाचार
धर्मका नाममा राजनीति गर्ने दिन अब सकिए : मन्त्री राई
आश्विन २३, २०७६ रासस
काठमाडौँ — शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले धर्मका नाममा राजनीति गर्ने दिन अब सकिएको बताएका छन् । नेपालगञ्जमा आयोजित रामलीलाको समापन समारोहमा उनले धर्मका नाममा एकापसमा जनता भिडाउने छुट कसैलाई नभएको स्पष्ट पारे ।
“जनता जागरुक भइसकेका छन्, धर्मका नाममा अब राजनीति हुँदैन, सबै मिलेर विकास गर्नुपर्छ”, मन्त्री राईले भने । संविधानले सबै धर्मलाई सम्मानका साथ समानताको अधिकार दिएको उनले बताए । नेपालगञ्जले धार्मिक तथा सामाजिक सद्भावको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको उनको भनाइ थियो । रामलीलाको निरन्तरता र प्रभावकारिताका लागि सांसद विकास कोषको रकमबाट रामलीला व्यवस्थापन समितिलाई रु २५ लाख सहयोग गरेको उनले बताए ।
नेपालगञ्जको सांस्कृतिक पहिचानको रुपमा रहेको रामलीला मञ्चन यसवर्ष सकिएको छ । रामलीलाको यो १५१औैँ संस्करण हो । सांस्कृतिक महत्वको रामलीला भव्य, सभ्य र सफलरुपमा सम्पन्न भएको सञ्चालक समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष सन्तोषकुमार कनोडियाले जानकारी दिए । भारतको वृन्दावनका कलाकार राधारमण शर्मा नेतृत्वको १५ सदस्यीय टोलीले यस वर्षको रामलीला मञ्चन गरेको हो । धनुषयज्ञ, रावणबध, भरतमिलाप र रामको शुभराज्याभिषेकसहित रामलीला महोत्सव सम्पन्न भएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन २३, २०७६ १९:२७
उपनिर्वाचनमा ४ लाख ५४ हजार मतदाता, ५३७ मतदान केन्द्र
आश्विन २३, २०७६ राजेश मिश्र
काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले मसिंर १४ मा हुने तीनवटै तहका रिक्त स्थानहरूको उपनिर्वाचनका लागि मतदाता नामावली तथा मतदानस्थलको टुंगो लगाएको छ । आयोगका अनुसार उपनिर्वाचन हुने ५२ पदका लागि ४ लाख ५४ हजार १ सय १४ मतदाताले मतदान गर्न पाउने छन् ।
मतदाता नामावलीमाथिको दावी बिरोधपछि आयोगले अन्तिम मतदात नामावली सार्वजनिक गरेको हो । तीनै तहको उपनिर्वाचनमा ३७ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका १ सय ५५ वडाका मतदताले निर्वाचनमा भाग लिनेछन् ।
आयोगले सबैतिर मतदानका लागि २ सय ४४ मतदान स्थलको टुंगो लगाएको छ । ती मतदान स्थलमा ५ सय ३७ मतदान केन्द्र हुनेछन् ।
रिक्त रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य– १, प्रदेशसभा सदस्य– ३, नगरपालिका प्रमुख–१, गाउँपालिका अध्यक्ष–३, गाउँपालिका उपाध्यक्ष १ तथा नगर र गाउँपालिकाका ४३ वडाध्यक्ष पदहरुका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले तीनवटै तहका रिक्त स्थानहरूको निर्वाचन व्यवस्थापनको आवश्यक तयारी अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए । यसअघिको निर्वाचनमा ती स्थानमा कुल ४ लाख ३० हजार हाराहारीमा मतदाता थिए । दुई वर्षको अवधिमा करिब २४ हजार मतदाता थपिएका छन् ।
आयोगका अनुसार निर्वाचन हुने क्षेत्रका कुल मतदातामा महिलाको संख्या बढी छ । २ लाख ३३ हजार ४ सय २ महिला मतदाता र २ लाख २० हजार ७ सय १० पुरुष मतदाता छन् । अन्य लिङ्गि मतदाताको संख्या २ रहेको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभातर्फ कास्की क्षेत्र न. २ मा ७१ हजार ८ सय ७१ मतदाता छन् । उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचित तात्कालिन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि त्यहाँ उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
प्रदेशसभा भक्तपुर भक्तपुर १(१) मा ४५ हजार १५ मतदाता छन् । त्यहाँबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हरिशरण लामिछानेको निधनका कारण उपनिर्वाचन हुँदैछ । बाग्लुङ २(२) प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा ३६ हजार ९ सय २६ मतदाता छन् । गण्डकी प्रदेशसभामा निर्वाचित टेकबहादुर घर्तिमगरको निधनपछि उक्त क्षेत्र रिक्त छ । प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र दाङ ३(२) को मतदाता ७३ हजार १ सय ७२ छन् । त्यहाँबाट प्रदेशसभा ५ मा निर्वाचित उत्तरकुमार ओलीको निधनपछि रिक्त हुन पुगेको उक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचनको तयारी छ ।
२०७४ को बैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा ७ सय ५३ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । सोही वर्षको मसिंरमा एकैसाथ प्रतिनिधिसभा र सातवटै प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको आकस्मिक निधनलगायतका कारणले तीनवटै तहका ५२न स्थान रिक्त भएको हो ।
स्थानीय तहतर्फ धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख तारा सुब्बा, महोत्तरी पिपरा गाउँपालिकका अध्यक्ष विनोद चौधरी, संखुवासभा मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवाल, पाँचथर फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरकुमार नेम्वाङको निधन भएर रिक्त हुन गएका ती स्थानमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष सिन्धुहमाल शाहीको निधनका कारण त्यहाँ उपनिर्वाचन हुँदैछ । वडाध्यक्ष पद रिक्त भएका वडा ४३ छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनमा अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले पद रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको हकमा एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । गत साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले रिक्त स्थानहरुमा एकै दिन उपनिर्वाचन गराउन मसिंर १४ को मिति तय गरेको हो ।
प्रकाशित : आश्विन २३, २०७६ १९:०१
पीपीईको गुणस्तर जाँच्‍न नाष्टले बनायो पीसीटी डिभाइस
वर्तमान अवस्थामा मानिसहरूलाई फेरि गरिबीमा नधकेल्नको लागि महत्वपूर्ण चुनौती : प्रधानमन्त्री ओली
गण्डक ब्यारेजमा पानीको सतह उच्च, सतर्कता अपनाउन आग्रह
अपांगता भत्ता कटौती नहुने
अख्तियारलाई लेखा समितिको पत्र- वाइडबडी र सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा अनियमितता गर्ने भेटिए कि भेटिएनन् ?
सार्कलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी क्षेत्रीय संगठन बनाऔं : परराष्ट्र मन्त्री